Vokatra fanitarana penis - 50%
Home » Vokatra fanitarana penis
Vokatra fanitarana penis
Ny vokatra fanitarana filahiana mahazatra indrindra dia misy karazana vokatra efatra: pilina, zezika, fanazaran-tena ary patsa.
Raha te hahalala izay mety aminao indrindra, dia ireto misy teboka ho an’ny tsirairay izay mety tsy maintsy ianaranao lavitra.
* Ny pilina
Raha ny fahitan’ny maro izay mikaroka fomba tsotra kokoa dia ny pilina no fomba mora indrindra haleha. Ireo dia azo ampiasaina amin’ny fomba mora kokoa amin’ny fidirana sy fividianana mora kokoa. Ary ny ankamaroany mahita ireo vokatra ireo ho tsotra ampiasaina.
Raha ny fanadihadiana natao tamin’ny tsena iray natao tato ho ato dia voalaza fa misy ny fitomboan’ny mpanjifa amin’ity karazana fitaovana fanitarana ity noho ireo antony voalaza etsy ambony ireo.
Ny tena mampalaza an’ireto vokatra ireto dia ny fiasan’izy ireo amin’ny fampitomboana ny rà mandriaka ao amin’ny faritry ny zezika – mihetsika toy ny vokatra mampiroborobo – rehefa miomana hanao firaisana ny vatana.
Ny fakana pilina fanitarana penis amin’ny vanim-potoana mety dia mety hanehoana vokatra tsara kokoa raha mitombo ny habeny sy ny vatan’ny faritry ny penika. Ny tombontsoa hafa dia mitaky fitomboan’ny tanjaka ara-nofo ataon’ny mpampiasa, ny hamafin’ny fananganana, ny tombony amin’ny ejaculation, ary ny hafa.
* Ny Gel
Ny fomba izay angamba no malaza indrindra amin’ity taona ity eo amin’ireo lehilahy te-hanitatra ny filahiany, na kely izy na lehibe, dia gel lehibe. . Miaraka amin’ny fihetsika eo noho eo, ny gel dia manaparitaka avy hatrany ny lalan-drà ao amin’ny filahiana, ka mahatonga ny fananganana mafy sy ny filahiana lehibe kokoa mandritra ny firaisana.
* Ireo Stretchers
Nomena anarana toy izany ny mpaninjara satria manampy amin’ny famelarana sy fampitomboana ny vatan’ny erectile anao. Ireo vokatra ireo dia mampiasa tanjaka izay mety hahatonga ny sela ao amin’ny efi-penilika hihetsika – mahatonga ny vatan’ny vatanao ao amin’io faritra io hihamaro ary hitaona ny fananganana.
* Ny fampiharana
Ny fanazaran-tena manatsara penile dia tsy mila pilina na fandidiana hampandeha azy ireo. Io no fomba voajanahary indrindra amin’ny fahazoana filahiana lehibe kokoa.
Ireo dia azo atao mandritra ny fito (7) minitra ary azo tanterahina isan’andro mba hahitana vokatra tsara kokoa. Ireo dia miompana amin’ny hafainganam-pandeha na hakinganana izay ahazoanao aina indrindra hanombohana amin’ny voalohany, mandra-pahafahanao miasa amin’ny fanazaran-tena amin’ny penile avo lenta kokoa hahatrarana tombony lehibe indrindra.
* Ny patch
Somary mitovy amin’ny fampiasana pilina, ny patch patch dia miasa amin’ny fitantanana ireo raokandro sahaza ao anaty ny rào. Saingy ny fomba fiasa dia tsy mitovy amin’ny fanafody fampitomboana ny filahiana satria ireo zavatra ireo dia miasa amin’ny teknolojia transdermal izay manampy anao hahazo ny habe tadiavinao ao anatin’ny fotoana fohy kokoa.
Miaraka amin’ny ankamaroan’ireo vokatra fanitarana filahiana ireo dia azonao atao ny misafidy ny hankafy fomba tsy fandidiana amin’ny fanatrarana tombony azo amin’ny penile.